बद्री केसीको दाउ, एनआरएन अमेरिका फुटाऊ— लामा – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अन्तर्वार्ता / बद्री केसीको दाउ, एनआरएन अमेरिका फुटाऊ— लामा
4 weeks ago अन्तर्वार्ता, प्रवास, समाचार Leaveacomment
सोनाम लामा, क्षेत्रीय संयोजक, गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्
अमेरिकामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अभियान कसरी अगाडि बढेको छ ?
अमेरिकामा एनआरएनए अभियान सशक्त ढंगले अगाडि बढेको छ । मेम्बरसिपमा समेत हामी (एनआरएन युएसए) अगाडि छौं । यहाँ झण्डै १५ हजारको संख्यामा एनआरएनए मेम्बरहरु हुनुहुन्छ । यो आइसीसी (गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्)को एनसीसीमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् हो । सबैको पहलले गर्दा यो सम्भव भएको हो । आज आईसीसीमा एनआरएन अमेरिका सशक्त राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को रुपमा उभिन सकेको छ ।
सदस्य मात्रै बढेको हो या अरु केही पनि भएको छ ?
मुख्यतः एनआरएन अमेरिका अझै परिपक्व भैसकेको छैन । जग बस्न सुरु भइरहेको छ । यो बेला गर्न सकिने खालका कामहरु पनि नभएको हुन सक्दछ । त्यस्तो लागेको पनि हुन सक्दछ । यसको अर्थ केही नभएको भन्ने हुँदै होइन, आज एनआरएन भनेर गर्व गर्न सक्ने वातावरण बनिरहेको छ । सबैको साझा मञ्चको रुपमा यो अघि बढिरहेको छ । सबैको प्रयास र अनि सहकार्यले एनआरएन अमेरिकाले जन्मभूमि नेपाल र कर्मभूमि अमेरिकामा केही आशलाग्दा कामहरु गर्न सकेको छ, तर अझै धेरै गर्न सकिन्छ, हामीहरु मिलेर जान सक्दा धेरै सकारात्मक नतिजाहरु देखिन सक्दछ ।
एनआरएनए आईसीसीको योजनामा एनआरएन अमेरिकाको योगदान चाहिं कस्तो छ नि ?
हामी (एनआरएन युएसए)ले यथेष्ट योगदान दिएका छौं । सदस्यता बढाएर एउटा सन्देश दिएका छौं भने त्योबाहेक पनि आईसीसीले तय गर्ने योजनामा एनआरएन युएसए सधैं सहयोगी बनिरहेको छ । जस्तो कुरा गरौं, भूकम्पपीडितलाई राहत, उद्धार अनि पुनर्वासको मुद्दामा हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । एनआरएनए आईसीसीको भवन निर्माणमा पनि हामीले सहयोग गरेका छौं । तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन लक्ष्यका योजनामा हामीले सहयोगी भूमिका निभाइरहेका छौं । आईसीसीले तय गरेका कुनै पनि योजनामा रकम संकलनमा समेत हाम्रो प्रभावकारी उपस्थिति रहँदै आएको छ ।
के तपाईंलाई एनआरएन युएसएको योगदानअनुरुपको उपस्थिति आईसीसीमा हुन सकिरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
तपाईंले भन्न खोज्नुभएको आईसीसीको बोर्डमा हाम्रो उपस्थितिको होला । हो, त्योचाहिं योगदानअनुरुपको हुन सकिरहेको छैन । यसका अरु धेरै फ्याक्टरहरु होलान्, तर एउटा महत्वपुर्ण फ्याक्टर भनेको चाहिं हामी युनाइटेड नहुनु नै हो, हुन नदिनु नै हो । एनआरएन युएसए मेम्बरको हिसाबले कामको हिसाबले माथि आइरहेको छ, यसलाई यही हिसाबले अघि बढ्न दिए भोलि पावरफूल हुँदै जान्छ भन्ने हामीभन्दा बाहिर रहेकाहरुमा पलाएको डरले पनि काम गरेको छ भने त्यसमा हामीहरु पनि प्रयोग भइरहेका छौं । अर्को पक्ष डाह, इष्र्याले पनि काम गरेको छ, यो व्यक्ति माथि जान्छ, गयो भने हाम्रो महत्व रहन्न भन्ने मनको डरले पनि कतिपय हाम्रा आफ्नै साथीभाइलाई पिरोलेको छ, त्यही भएर जानी–नजानी, व्यक्तिगत पदीय स्वार्थले गर्दा हामीहरु प्रयोग भइरहेका छौं । हामी यो बेला युनाइट हुनुपर्नेमा झन् प्रयोग भएर बाँडिएका छौं, यसले अरुलाई फाइदा पुगिरहेको छ ।
प्रयोग भएको कुरा गर्नु हो, थोरै प्रष्ट्याइदिनुहोस् न ?
हाम्रो सदस्य संख्याको हिसाबले हामीले झण्डै १ सय ८० भन्दा बढी आईसीसी निर्वाचनका लागि डेलिगेट्सहरु पाउँछौं । यो भनेको निकै महत्वको संख्या हो, यसले निर्णायक रोल प्ले गर्न सक्दछ, यो हेक्का आईसीसीमा भएका साथीहरुलाई छ । यहाँको शक्ति कमजोर पार्न सक्दा मत बाँडिने बुझेरै यो सबै भइरहेको छ । हामीलाई युनाइट हुन नदिने कामहरु भइरहेका छन् । ‘सिन’मा एउटा देखिए पनि ‘अनसिन’मा यसको उद्देश्य फरक छ । हामी एक भएर जाँदा हाम्रो शक्तिले गर्दा खोजेको उपस्थिति आईसीसीमा हामी पाउन सक्दछौं, त्यसो हुँदा बाहिरकाले आफूलाई फाइदा हुँदैन भन्ने बुझेर अहिलेदेखि नै योजना बनाएर अघि बढेको देखिन्छ । दुःख यो मानेमा हो कि हामी पनि प्रयोग भइरहेका छौं ।
प्रयोगचाहिं को भयो, डिभाइड गर्न चाहिं को लाग्यो ?
हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ, हाम्रा सबै साथीहरुको चाहना एनआरएन युएसए बलियो होस्, आईसीसीमा समेत हाम्रो बलियो पकड रहोस् भन्ने नै होला र हुनुपर्दछ । तर, जानेर–नजानेर वा अरु कुनै कारणले होस् हामी प्रयोग भइरहेका छौं । जस्तो म भनौं– गौरी जोशीजीको उम्मेदवारी सम्बन्धमा अहिले आईसीसी महासचिव डा. बद्री केसी जीले पत्र काट्नुभएको छ । यसले गौरीजी र उहाँको शुभेच्छुकहरुलाई लाग्ला आईसीसी महासचिवले पोजिटिभ रोल प्ले गर्नुभयो भनेर । तर, त्यसो होइन खासमा उहाँ (महासचिव) हामीबीच खेल्न खोज्नुभएको हो, कसैलाई प्रयोग गरेर एनरआरएन युएसएलाई एक हुन नदिने एउटा योजनाको त्यो अंश हो, महासचिवको पत्र मिलाउनेभन्दा कुरा बल्झाउने, मिल्न नदिने योजनाअनुरुप आएको हो । हाम्रो समस्या हामीले मिलाउने हो, अरुलाई छिर्न दिएपछि त्यसले सजिलो बनाउने होइन, झन् अप्ठ्यारा स्थिति निम्त्याउँछ भन्ने हो । भोलि यो इगोको रुपमा अघि बढ्छ भन्ने नै हो । एकपछि अर्को गर्दै यस्ता कामले हामीहरु कमजोर हुँदै जान्छौं ।
उसो भए, विवाद यहाँ देखिए पनि यसको सम्बन्ध आईसीसीको आगामी निर्वाचनसँग केन्द्रित छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
एकदम हो, हामी अहिले बलियो छौं, सायद यही एकता रहे हामी निर्णायक तहमै पनि रोल प्ले गर्न सक्छौं, हाम्रो मतको ठूलो अर्थ हुन्छ यो बुझेर हामीलाई कमजोर गराउन अहिलेदेखि नै कामहरु भइरहेको देखिन्छ । यसमा स्वार्थले पनि काम गरेको छ । जहाँ स्वार्थले काम गर्छ, त्यहाँ प्रयोग पनि भइन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ ।
आईसीसी महासचिवको रोल गलत हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
गलत मात्र होइन कुनै पनि अर्थबाट त्यो सही हुँदै होइन । हामी यहाँ छौं (क्षेत्रीय संयोजक, क्षेत्रीय सहसंयोजक) हामीलाई क्रस गरेर अघि बढ्न खोजे हाम्रो के काम ? हुन त त्यो पत्र आईसीसीको होइन उहाँको व्यक्तिगत पत्र हुन सक्ला । त्यसमा पछि आईसीसीले केही एक्सन लिन्छ होला । तर, कसले के ग¥यो–गरेन भन्नुभन्दा पनि मुख्य कुरा हामी किन प्रयोग भयौं भन्ने हो । यदि चित्त नबुझे वा समस्या भए समाधानका धेरै उपायहरु निस्कन्छन् । तर, विधिसम्मत अघि बढ्नुपर्दछ न कि पावर शो गर्न खोज्ने यो कामले सही निकास दिँदैन ।
अर्को कुरा, मलाई दुःख लागेको अर्को पक्ष भनेको संरक्षकसमेत रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेसमेत यसमा खेलिरहनुभएको छ, सम्मानित व्यक्ति भएर उहाँले त्यो गरिमाभन्दा तल झरेर सक्रियता देखाएकोमा मलाई साहै्र चित्त दुखेको छ ।
गौरीजीको कुरा गर्नु भो, उहाँको केसमा तपाईं अलि बढी पूर्वाग्रही हुनुभयो भन्छन् नि ?
हेर्नुहोस्, गौरी जी मेरो एकदम नजिकको साथी हुनुहुन्छ । उहाँ संस्थामा चाहिने मान्छे पनि हो । उहाँको ऊर्जाशील समय, क्षमतालाई एनआरएनए मुभमेन्टमा लग्न सक्दा संस्थालाई फाइदा पुग्दछ, यो म राम्रोसँग बुझ्दछु । मलाई गौरीजीप्रति कुनै पूर्वाग्रह राख्नुछैन । तर म सँगसँगै आईसीसीको क्षेत्रीय संयोजक पनि हुँ, मेरो आफ्नै पदीय भूमिका छ । एनआरएन युएसए भनेको आईसीसीकै राष्ट्रिय शाखा हो, यो आईसीसीकै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भएकाले विधान त मान्नैप¥यो नि होइन र ? के गर्नु साथी हँुदाहँुदै पनि विधानले नदिएपछि मैले चाहेर मात्र के भयो र ? विधानमै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अध्यक्ष बन्न एक कार्यकाल पदाधिकारी वा बोर्डमा बसेको हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यो नभएपछि मैले के गरौं त ? सन् २००३ देखि अहिलेसम्मको कुनै पनि बोर्डमा उहाँको नाम छैन, न्याकबाट एनआरएन अमेरिका बनेको हो वा होइन यो विवाद वा छलफलको विषय नै होइन । मुख्य कुरा आईसीसीको राष्ट्रिय शाखाको रुपमा अमेरिकाले सम्बन्धन लिएपछिको कुनै पनि समितिमा उहाँको नाम छैन अनि मैले के गर्न सक्छु । मैले त केवल निर्वाचन समितिलाई विधानबारे अवगत मात्र गराएको हुँ । मैले मानेर मात्र भएन, अरुले मान्दैनन् । भोलि फेरि अर्को लफडा सुरु हुन्छ, यी सबै छोडेर विधानअनुरुप अघि बढ्नुपर्दछ ।
केही त उहाँ बोर्डमा हुनुहुन्थ्यो, काम गरेको व्यक्तिको हो भन्दै हुनुहुन्छ नि ?
होइन उहाँ (गौरी जी) क्यापेबल मान्छे हो । हामीले पहिला सल्लाह पनि गरेका हौं, उपाध्यक्षमा आउनुहोस् भनेर भन्यौं पनि पहिला पोजिटिभ नै हुनुहुन्थ्यो । खोइ कसले के भन्यो म उठ्न पाउँछु भन्दै अध्यक्षमा नै उठ्नुभयो । मैले उम्मेदवारी नदिनुहोस्, प्रचार नगर्नुहोस् भन्ने कुरा भएन । उहाँको उम्मेदवारी परेपछि क्षेत्रीय संयोजकको नाताले मैले आईसीसीको विधानलाई फलो गरेको न हो । कसले के भन्यो भन्ने कुरा रहेन । अहिले को–को आउनुभएको छ, उहाँको नाम छुटेको हो, उहाँले गर्नुभएको हो, हामीसँग पुस्तक छ, डकुमेन्ट छ भनेर त्यो अहिले भनेर के फाइदा छ र । मुख्य कुरा आईसीसीमा पठाएको डकुमेन्टमा के छ भन्ने हो, छ भने ठीकै छ । छैन भने के गर्न सकिन्छ र । अनि अर्को कुरा, मैले आईसीसीको क्षेत्रीय संयोजकको हिसाबले निर्वाचन समितिलाई सबै जानकारी गराएको छु । अब निर्वाचन समितिले फाइनल गर्ने कुरा हो । यहाँ (अमेरिका) दर्ता छ, आफ्नै विधान छ या के छ यो सबै बुझेर गर्ने कुरा भनेको समितिले हो, यो मेरो जिम्माको विषय होइन ।
भनेपछि विधान बाझियो भने के गर्ने नि ?
होइन, कोहीकसैले आईसीसीको विधान मान्दैनौं भन्छ भने हामी के गर्न सक्छौं र ? आईसीसीको शाखा हुँ पनि भन्ने अनि विधान पनि मान्दिन भन्ने, यो त कसरी होला र ? हो, संस्था यहाँ दर्ता भएको, आफ्नै विधान पनि छ तर यसको अर्थ आईसीसीको विधान नमान्ने भन्ने हुन्छ र ? यदि यसो भयो भने आईसीसीसँग सम्बन्धन हौं भनेर भन्न सकिएला र । त्यसैले विवाद बढाउनुभन्दा निकास तिर लागौं । संस्थामा आज नभए भोलि पालो आइहाल्छ नि, संस्थालाई बलियो बनाउनेतर्फ लागौं । यसैले व्यक्तिअनुरुप विधानलाई व्याख्या गर्न वा विधानलाई त्यहीअनुरुप ढाल्ने काम कोही कसैले पनि नगरौं । आईसीसीको एक–दुई वटा कुरा पनि नमान्नेसम्मको काम भएपछि गाह्रो पर्दैन र !
यी सबै हुनुको पछाडि अन्यको खेलसँगै तपाईंको पनि आगामी आईसीसी यात्रा पनि जोडिएको छ होला नि ?
यहाँ म र डा. केशव पौडेलजी मिलेर यो सबै गरिराखेको हो भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको देख्दछु । म आरसी अनि उहाँ (केशव) यहाँको अध्यक्ष त्यही कारणले हामीबीच संस्थागत कामले पनि बढी बोलचाल हुनु, सँगै हिंड्नु स्वाभाविक नै हो, तर मेरा लागि केशव वा अन्य उम्मेदवार सबै समान हुनुहुन्छ । म कसैप्रति उदार र कसैप्रति अनुदार छैन, विधानले जे भन्छ त्यही गर्छु । कसैलाई फाइदा पु¥याउन वा बेफाइदा गर्ने मेरो ध्येय हुँदै होइन ।
हो, मलाई पदाधिकारीमा उठ्न बाहिरका साथीहरुले पनि प्रस्ताव गरिरहनुभएको छ, कतिपय साथीहरुले भोलिको अध्यक्ष नै हो पनि भन्नुहोला, भन्नुहुन्छ । संस्थामा लागेपछि पदमा पुग्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक नै मान्नुपर्दछ । तर, मलाई योभन्दा महत्वपूर्ण भनेको मेरो घर (एनआरएन युएसए) को एकता महत्वपूर्ण छ । यसलाई स्ट्रोङ बनाउँछु, यो बलियो हुँदा मात्रै हामी बलियो हुन्छौं । यसलाई बलियो बनाउँदा म माथि जान पनि सक्छु, नजान पनि सक्छु । तर, केही साथीहरु अहिलेदेखि नै मेरोविरुद्ध लाग्नुभएको छ । भोलि सोनाम माथि गयो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ भनेर सानो चित्त लिइरहनुभएको छ । व्यक्तिगत लाभ वा हानिसँग अहिलेदेखि नै लेखाजोखा गर्न थालिएको छ । मलाई जसरी पनि बिगार्नुपर्छ भनेर हाम्रै साथीहरु पनि लाग्नुभएको छ । कुरा म जाने–नजाने, भोलि के गर्नेभन्दा पनि हामी बलियो एकताबद्ध हुनु नै हो । यसो हुन सक्दा हामी सबैका लागि त्यो हितकर हुन सक्दछ ।
प्रस्तुति— सुरज भण्डारी
Previous लाहोरमा आत्मघाती हमला, २६ को मृत्यु, ४९ जना घाइते
Next पतिको हत्या गर्ने महिला प्रहरी खोरमा